Iibsiga Caymiska Baabuurka / Minnesota.gov
Ma maamuli karti sabab kasta oo go’aan ka gaadha waxa aad ka bixinayso caymiska baabuurka, laakiin inaad ka sii horayso oo ka sii warhayso waxay kuu kaydin kartaa adiga lacag oo damaana qaadi kartaa in hantidaada la ilaaliyo xaalad shilka ama khasaaraha.
Go’aan ka gaadh nooca daboolida ee aad u baahantahay oo soo wac dhowr wakaaladood ku celinta. Hubso inaad waydiiso waxaytahay xeerka lacag bixinta dheeraadka ah ee shilalka iyo xad gudubyada jidka. Hubso inaad sheegto haddii baabuurkaagu uu leeyahay qalabka badbaadada ama ka ku lidka ah tuugada oo waydii wax ku saabsan lacag dhimista la heli karo.
Niyada ku hay qadarka ugu yar ee daboolista aan ku filnaan karin inay ilaaliso hantidaada. la hadal wakiilkaaga ama shirkada si ay go’aan uga gaadhaan qadarka saxda ah ee daboolidaada.
Minnesota waxay u baahantahay afar nooc oo kala duwan oo daboolida ah.
Ka dhowrista Dhaawaca Shakhsiyeed (PIP): daboolida kharashka caafimaadka, mushaharka lumay, iyo adeegyada beddelka.
Masuuliyada:waxay caawisaa daboolida dhaawaca iyo kharashaadka waxyeelada hantida dhaca marka shilka looga fekero khaladkaaga.
Daboolida caymiska aan ku filnayn: waxay bixisaa sheegashooyinka caafimaadka marka darawalka kale masuuliyada shilka guudka laga saaro aanu haysan masuuliyad ku filan oo uu ku daboolo sheegashooyinka .
Daboolida caymiska aan ku filnayn:waay bixisaa kharashyadaada caafimaadka ka dib markaad isticmaashay dhammaan dheefahaagii “PIP” iyo marka darawalka kale masuuliyada shilka guudka laga saaray laakiin aanu daboolin caymisku.
Daboolida Ikhtiyaarka ah
Shilka waxa uu daboolaa waxyeelada baabuurkaaga marka aad shil la gasho baabuur kale ama shay.
Dhammaystiran waxay dabooshaa waxyeelada muuqada ee aan ka iman shilka. Tan waxaa la mid ah khasaaraha dabka, tuugaa, roobka, waxyaabo soo dhacaya, burburinta ula kaca ah, xawayaan jiidha iyo daadka.
5 Tilmaamood oo lagu yareeyo qiimahaaga
Ka iibso: isbarbar dhig qiimayaasha dhowr shirkadood oo hel caadada mar labaad lagu baarayo dhowrkii sanadood ee kasta - gaar ahaan haddii aad la kullanto isbeddel nolosha ah oo wayn sida guursashada ama ku darista wadista kurayda xeerkaaga.
Waydiiso jarjaris sare: jarjaristu waxay ka dhigantahay qadarka aad bixiso ka hor inta aanu xeerkaagu bilaaban. Jarjarista sare waxay hoos u dhigi kartaa qadarka caymiska si wax ku ool ah.
Yaree daboolida baabuurta hore: ma samayn karto macno in la hayo daboolida ikhtiyarka ah sida shilka ama mid dhammaystiran.
Ka faa’iidayso lacag dhimista: soo jeedinta shirkado badan oo caymiska ah kuwaas oo ay ku jiri karaan iibsiga noocyada kale ee caymiska ee shirkad isku mid ah, haysashada diiwaan wadista baabuurka oo wanaagsan, ama ku rakibida badbaadada iyo sifooyinka amniga.
Joogtee buundo wanaagsan: marka caadooyinka wadista baabuurku ay yihiin habka ugu wanaagsan ee lagu yareeyo kharashkaaga caymiska, hagaajinta waxyeelada buundada qiimayntu waxay kaa caawin kartaa ku jirida iyo ka maqnaanta jidka.
Go’aan ka gaadhida qiimahaaga
Waxaa jira tiro asbaaba ah oo saamaysa qadarka caymika ee aad bixiso iyo sida qiimahaagu looga go’aan gaadho waxay kala duwaan doonaan shirkad ahaan.
Guud ahaan, asbaabaha soo socdaa waxay caawin doonaan go’aan ka gaadhda inta aad ku bixiso daboolida.
Ikhtiyaarka dheeraadka ah ee daboolida sida shilka duqaynta iyo daboolida dhammayska tiran waxay kordhin doontaa kharaska xeerka.
Waxyaabaaha qofka ku saabsan sida da’da, sinjiga, iyo heerka guurka.
Nooca baabuurka aad wado ( samayska, moodeelka, iyo sanadka) iyo caadooyinkaaga wadista sida inta mayl ee aad wado iyo halka aad wado.
Diiwaanka wadista, taariikhda amaahda, iyo taariikhda sheegashadii hore.
Lacag dhimista layman badan oo caymiska ah oo shirkada lala leeyahay.
Kharashka dheeraadka ee xad gudubyada jidka ee shilalka.. Sida iyo goorta kharashka dheeraadka ah loogu dabaqo waxay ku kala duwanaan doonaanta shirkad ahaan, laakiin caymiyahaagu waa inuu adiga ku siiyaa “Xaashida Shaacinta Kharashka Dheeraadka ah” marka aad codsato xeerka.
Qadarka jarjarida ( inta aad bixiso ka hor inta aanay shirkadaada caymisku bixin).
Xadadka Masuuliyada aan Tooska ahayn
Sharciga Minnesota 65B.49 Biennial Limits waxay uga baahantahay Guddoonka Si uu u habeeyo Xadadka Masuuliyada Tooska ah ee lagu Dabaqo Mulkiilayaasha Baabuurta la kiraysto sanad kasta oo kale. Halkan waxa ah lambarada cusub, ee dhaqan galka noqoneysa 1/1/2017.
Xadadka masuuliyada aan Tooska ahayn ee Lagu dabaqo Mulkiilayaasha Baabuurta La kiraysto
Taariikhda Dhaqan galka Dhaawaca jidhka ee hal qof Dhaawaca jidhka ee shilka Waxyeelada Hantida
Qaddarada doolarka ah ee lagu sheegay tuduca waxaa lagu habboonaysiin doonaa iyaddoo ku salaysan lifaaqa qiimaha macmiilka ee macaamiisha magaalada, ee loo yaqaano CPI-Uee ay daabacday United States Bureau of Labor Statistics. Qadarada doolarka ee lagu bilaabay tuducan waxay ku salaysanyihiin qiimaha lifaaqaas Juulay 1995, kaas oo ah tixraaca lifaaqa aasaaska ah ee ujeedooyinka tuduca. Qadarada doolarka ee tuducan waxa uu beddeli doonaa dhaqan galka Janaayo 1 mid kastoo sanadaha tirooyinka kinsiga leh ee ku salaysan faraqa boqolkiiba inta ay tahay ee u dhexaysa lifaaqa Juulay sanadka ka horeeyaysa iyo tixraaca lifaaqa aasaaska ah, ee lagu xisaabay boqolkiiba inta dhammaan ugu dhowayd.
Guddoomiyaha waxa uu ku dhawaaqi doonaa oo daabici doonaa, xiliga ama ka hor Sebtambar 30 sanadka ka horeeya, isbeddelada qadarka doolarka uu tuducan u baahanyahay inuu dhaqan galo Janaayo 1 mid kastoo ah sanadaha tirooyinka kinsida ah leh. Guddoomiyahu waxa uu isticmaali doonaa dib ugu noqoshadii u dambaysay ee lifaaqa Juulay ee la heli karo Sebtambar 1. isbeddelada qadarada doolarka ah waa in loo kordhiyaa $5,000, oo wax isbeddel ah laguma samayn doono qadarka doolarka ilaa isbeddelka lifaaqu u baahanyahay ugu yaraan beddel $5,000.